फुट्यो एमाले ! ओलीको पक्षमा मतदान नगर्ने सांसदहरुलाई कारवाही हुने — onlinedabali.com
फुट्यो एमाले ! ओलीको पक्षमा मतदान नगर्ने सांसदहरुलाई कारवाही हुने
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) फुटको दिशामा अगाडि बढेको छ । नेता माधव कुमार नेपाल समूहले आजको संसद बैठकमा सहभागी नहुने र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको प्रस्तावमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै एमाले आइतबार लगाएको ह्वीपको उलंघन हो ।
सोमबार साँझ नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीलाई अन्तिम मौका भन्दै ९ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । ओलीलाई पत्र पठाउँदै नेपालले पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन र समझदारीमा पार्टी संचलान गर्ने प्रतिवद्धता माग गरेका थिए । ओलीले समय सीमा नाघेपछि विहान ११ बजे सामाजिक संजालमार्फत केही समस्या भए सँगै बसेर समाधान गर्न अपील गरेका थिए । उनले पार्टीमा आन्तरिक समस्या भए बसेर छलफल र समाधान गर्न सकिने समेत बताएका थिए ।
ओलीले ट्वीटमार्फत सँगै बसेर छलफल गर्न आह्वान गरेको बेला नेपाल समूहका नेताहरु बैठकमा थिए । नेता नेपाललगायतका नेताहरुले सामुहिक राजिनामाको प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन । केही सांसदहरुले आफूहरु राजिनामा नदिने भन्दै बैठक बहिस्कार समेत गरेका थिए । सहमति नभएपछि नेपाल समूहका नेताहरुले राजिनामा पनि नदिने र बैठकमा पनि नजाने मध्यमार्गी बाटो तय गरे ।
सामुहिक राजिनामा र नेपाल समूहको यो निर्णयले ओलीलाई कुनै फरक नभएको नेताहरुले बताएका छन् । सामुहिक राजिनामा दिँदा पनि ओलीले मत नपाउने र अनुपस्थित हुँदा पनि मत नपाउने । नेपाल समूहको यो निर्णयलाई आत्मघाती भएको भन्दै ओली समूहका नेताहरुले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पार्टी ह्वीप नमानेको भन्दै अब ओलीले नेपाल समूहका बैठकमा सहभागी नभएका सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने भएका छन् । “हामी हेर्दैछौँं, संचारमाध्यमबाट संसद बैठकमा नजाने निर्णय गरेको सुनियो । विश्वासको मतको पक्षमा नभिए कारवाही हुन्छ” ओली समूहका एक नेताले बताए । उनले संसदीय दलका ह्वीप नमान्ने एमाले हुन नसक्ने र एमालेमा बस्ने अधिकार पनि नभएको बताए ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले ह्वीप उलंघन गम्भीर कुरा भाएको भन्दै त्यसबाट छुट नपाइने बताउँछन् । संसद बैठकमा आउनु हुन्छ वा हुँदैन हेर्न बाँकी रहेको भन्दै भट्टराईले त्यसपछि कारवाही वा अन्य प्रक्रियाको कुरा हुने बताए ।
अहिले त ओली र नेपाल समूहका नेताको पानी बाराबार छ । अझ विश्वासको मत नदिए यो झन् बढेर जानेछ । आजको दिनलाई एमाले विभाजनको दिनको रुपमा लिन सकिने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँन थालेका छन् ।
सरकार ढल्दा पनि संसद बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरुलाई ओलीले कारवाही गरेनन् भने एमाले फुटबाट जोगिन सक्छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म समानान्तर अभ्यास भइरहेको अवस्थामा यो सम्भव देखिँदैन । त्यसै त यसअघि नै ओलीले स्पष्टिकरण सोध्दै नेपालसहितका नेताहरुलाई निलम्बन गरिसकेका छन् । नेपाल समूहले संसद् बैठक बहिस्कार गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर ओलीको पक्षमा मतदान नगरेपछि एमाले फुट निश्चित जस्तै भएको छ ।
यस्तो थियो नेपालले ओलीलाई पठाएको अन्तिम पत्र
विषय: पार्टीको एकता कायम राख्न आग्रह ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट विघटन भई उक्त दुई पार्टीहरू पूर्ववत् अवस्थामा रहने तथा पुनः एकता गर्ने भए निर्वाचन आयोगमा जानु भन्ने भएपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाई छलफल गरिनुपर्थ्यो । त्यसो नगरी तपाईंले गत फागुन २८ गते पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र पार्टी विधान मिचेर केन्द्रीय कमिटी भंग गरी कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो । त्यसरी आयोजक कमिटी गठन गर्दा हामीलगायतका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने अत्यन्त स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नुभयो । त्यतिले मात्र नपुगेर तपाईंले केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र स्थायी कमिटीका सदस्यसमेत चारजनालाई पार्टी सदस्यबाट नै निलम्बिन गर्ने तानाशाही निर्णय गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाका हामी ३० जना सदस्यहरूलाई आधारहीन र पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोध्नुभयो । पार्टी स्थायी कमिटीमा मनपरी किसिमले नियुक्ति गर्दै कार्यविभाजन गरी निर्देशन जारी गर्नुभयो । प्रदेश समन्वय कमिटीमा स्वेच्छाचारी किसिमले पजनी गर्दै तपाईंले अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटीहरूलाई विघटन गर्नुभयो । जनसंगठन र पेसागत संगठनहरूमा पनि त्यसरी नै स्वेच्छाचारी किसिमले आफ्नो गुटबाहेकका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुभयो । तपाईंका यस्ता पार्टी विधानविपरीत तथा लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीतका क्रियाकलापहरू सच्याउन हामीले विभिन्न समयका प्रत्यक्ष वार्ताहरूमा समेत आग्रह ग¥यौँ । तर, त्यसप्रति तपाईंले कुनै सुनुवाइ गर्नुभएन ।